Kugadzirira Kumakambani Kubudirira mu2017 | Martech Zone
Kunyange mwaka weKisimusi ungave uri kutanga, nemapato evashandi achirongwa uye mince pie kuita kutenderera kwehofisi, ino inguvawo yekufunga pamberi pa2017 kuona kuti mumwedzi gumi nemiviri, vatengesi vanenge vachipemberera kubudirira kwavakaona. Kunyangwe maCMOs munyika yose angave achifema kugomera mushure megore rakaoma ra12, ino haisi nguva yekugutsikana.
Mugore rapfuura, takaona matekinoroji echikuru achisiyanisa zvipo zvavo, senge UberEats, Amazon zvitoro zvemabhuku uye apuro kudonhedza headphone jack, zvese izvi zvakamanikidza mabhizinesi kuti afunge nezve maivowo avanogona kushanduka. Kuisa pamusoro pechinyorwa chemisoro yakanyanya kukurukurwa chave chiri Virtual Reality, otomatiki uye yekutanga-up ethos yekupokana zvakajairwa.
Kutevera idzi sarudzo dzepamusoro dzebhizimusi uye mafambiro matsva, vatungamiriri vebhizinesi vakamanikidzwa kubvunza kuti nderudzii rwechinjo rwavanofanira kufunga nezvazvo zvakare Ino ndiyo nguva yevashambadziri kuti vafunge matanho api avanofanira kutora kuti vape mukana wevatengi-centric mu2017.
Kana sarudzo dzebhizinesi dzakatorwa nemhando hombe dzakatiratidza chero chinhu gore rino, ndezvekuti mutengi kiyi. Chekutanga uye chakakosha, vatengesi vanofanirwa kuve neiyi pfungwa yekudyara kwese muna 2017. Vanofanirwa kunge vachifunga nezve izvo zvemukati zvavanoda vatengi vavo, zvavanozobatana nazvo zvakanyanya, uye pamwe zvakanyanya kukosha, kuti vangade sei kugamuchira izvi zvemukati. Nekutarisa maitiro avanogona kubatana nevatengi vavo zvirinani, bhizinesi rinomira kuti riwane ruzhinji.
Kuita Nhare Kukoshesa
Nzira chete yekuita nevatengi nhasi ndeyekusvika kwavari nenzira dzavanoshandisa kazhinji. Iine makumi masere muzana yeUK vakuru vane yavo smartphone hazvishamise kuti kumabhizinesi mazhinji ichi chinhu chakakosha kusvika kune wako wekupedzisira mushandisi. Zvisinei, isu takakatyamadzwa kuwana mune yedu yapfuura Dhijitari Vanokanganisa taura kuti makumi matatu muzana emabhizinesi haasati ane webhusaiti mbozha Ino ndiyo nguva yevatengesi kuti vaone kuti havasi kurasikirwa nekukundikana kupa nharembozha, nepo avo vatove nenhare mbozha vanofanirwa kutarisa kuti chipo chavo ndechekushandisa mushe sezvinobvira.
Saiti mbozha inofanirwa kurapwa iine kukosha kwakafanana nedesktop saiti. Inofanirwa kuve nyore kufamba, neese maficha anowanikwa pane desktop, uye haifanire kunge yakanyongana kana kunetsa kufambisa. Izvi zvinoda kutenderera mamamenyu, maikoni, uye maturabarbar ayo anofadza ziso. Izvi zvinhu zvinofanirwa kuenzaniswa neakarongeka marongero uye akapfupi mutauro kuitira kuti nhare mbozha irambe, asi zvakare inodyika.
2016 yakanda huwandu hwetekinoroji nyowani nemaitiro edu nzira yekuti mabhizinesi afunge. Nekudaro, kuenda kune gore idzva, vatengesi vanofanirwa kungwarira kusaisa mari muhunyanzvi nekuda kwetekinoroji. Kune iyo 36% iyo yakati mune yedu Dhijitari Vanokanganisa vanotaura kuti vanotenda kuti bhizinesi ravo rinoda kuisa mari yakawanda padhijitari kuti ivandudze, zvakakosha kuti kudyara uku kuitwe mushure mekutsvagiswa kwakazara apo bhizinesi riine hunyanzvi hwekusimudzira iyo mari uye chete kana kesi yekushandisa chaiyo yagadziriswa.
Dhawunirodha Chirevo Chinovhiringidza Dhijitari
Pasina mafungiro aya, bhizinesi iri panjodzi yekuparadza mari pane chimwe chinhu chavasina kugona mumba kuchengetedza. Semuyenzaniso, 53% yevatengesi bvuma kunetseka kushandisa kushambadzira otomatiki software kupfuura yekutanga mari. Uye zvakare, chinodikanwa kubva kumutengi chinofanirwa kuve chiripo. Kana vasina kana hanya nekutora tekinoroji nyowani yekudyidzana nechako, chichava kutambisa mari.
Kuti upinde muna2017 nesimba rakasimba redhijitari, vatengesi vanofanirwa kutora ese aya mapoinzi achifunga. Kuchengeta mutengi pamoyo wesarudzo dzese, nepo vachiramba vachiongorora kukosha kungaunzwa nemaitiro matsva nematekinoroji, zvinoreva kuti makambani anogona kuvaka hukama hwakasimba nemushandisi wavo, uye pakupedzisira anosimbisa kuvimbika kwechiratidzo.
Tags: 20162017kasitomaYeMahara neThebhu Kushambadzirauk
Zvita 20, 2016 na9: 57 PM
Anotyisa post! Kutenda nekugovana.